काठमाडौँ, मङ्सिर १७ गते । तत्कालीन राजा पृथ्वीनारायण शाहको सालिक सिंहदरबारको मूल ढोका सामुन्ने नठड्याइएको भए कहाँ हुन्थ्यो होला ? वास्तवमा त्यो सालिकलाई त्यहाँ राख्ने सुरुको निर्णय नै थिएन । निर्णय थियो, “चन्द्रागिरिमा राख्ने । ” पछि कसैको आदेशले निर्णय नै परिवर्तन गरियो र सालिकलाई ल्याएर सिंहदरबारको मूल ढोका अघिल्तिर ठड्याइयो ।
बालकृष्ण समको निर्देशनमा बनेको सालिकमा पृथ्वीनारायण शाहको औँला अवगुण्ठन मुद्रालाई जनाउँछ । शताब्दीपुरुष सत्यमोहन जोशीले नेपाली कलाका रूपरेखा पुस्तकमा यसरी उल्लेख गर्नुभएको छ, “मूर्तिकारद्वारा यस प्रतिमामा आगम शास्त्रीय लक्षणअनुसार राष्ट्रिय एकता राष्ट्रलक्ष्मी सुरक्षित होस् भन्ने भावनामा जुन अवगुण्ठन मुद्रा प्रदर्शन
गराइएको छ, त्यसको साङ्केतिक लक्षण हो– देश सबैको साझा हो । देश बेगर हामी कसैले हामी भन्न पाउने छैनौँ । ”
इन्जिनियर शङ्करनाथ रिमालले भने पृथ्वीनारायण शाहले आफूतर्फ उठाउनुभएको
औँलाले अवगुण्ठन मुद्रा नजनाउने दाबी गर्नुभयो । “औँलाको मुख आफूतर्फ उठाउनु अवगुण्ठन मुद्रा हुँदैन”, उहाँले भन्नुभयो । वाल्मीकि क्याम्पसमा योग विषय अध्यापन गर्दै आउनुभएका डा. हरिप्रसाद पोखरेलले पृथ्वीनारायण शाहले ठड्याउनुभएको औँलाको मुद्रा अवगुण्ठन नभएको बताउँदै अवगुण्ठन मुद्रामा दुवै हात जोड्नुपर्दछ भन्नुभयो ।